स्वास्थ्य पेज » बाँकेमा कहाँ कति छन् कोरोनाका गम्भीर विरामी ? बाँकेमा कहाँ कति छन् कोरोनाका गम्भीर विरामी ? – स्वास्थ्य पेज
बाँकेमा कहाँ कति छन् कोरोनाका गम्भीर विरामी ?
बाँकेमा कोभिड विशेष आइसोलेसन वार्डमा १०६ जना कोरोनाका विरामी उपचाररत् रहेका छन् । तीमध्ये २० जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बाँकेका कोरोना फोकलपर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा रहेको कोभिड आइसोलेसनमा ५८ जनामध्ये १६ जना र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण कोहलपुरमा उपचाररत् ४८ जनामध्ये ४ जना संक्रमितको अवस्था गम्भीर रहेको फोकलपर्सन श्रेष्ठले बताउनुभयो । यी दुई कोभिड विशेष अस्पतालमा लक्षण चिन्ह देखिएका र गम्भीर विरामीको उपचार हुँदै आएको छ ।
लक्षण चिन्ह नदेखिएका विरामीहरुलाई संस्थागत तथा होमआइसोलसनमा राख्ने गरिएको छ । जिल्लामा अहिले ३७ जना होमआइसोलेसनमा बसिरहेका छन् ।
बाँकेमा भाइरस संक्रमितको संख्या १ हजार ९ सय ७७ पुग्दा १ हजार ५ सय ४२ जना निको भएर डिस्चार्ज भइसकेका छन् । भाइरस संक्रमणबाट बाँकेमा १८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने बाहिरी जिल्लाबाट उपचारका लागि ल्याएका ८ जनाको मृत्यु भएको छ ।